Iindaba - Ixabiso lesondlo seSesame unama
1. I-Sesame paste (iTahini paste) ityebile kwiiproteni, iiamino acid, iivithamini kunye neeminerals, kwaye inexabiso eliphezulu kwezempilo.
2. Umxholo wecalcium wencindi yesame uphezulu kakhulu kunemifuno kunye neembotyi, okwesibini kulusu lwe-shrimp. Kuyanceda ukukhula kwamathambo namazinyo ukuba utya rhoqo (ungatyi nesipinatshi kunye neminye imifuno, kungenjalo impendulo yokubola kabini ye-oxalate okanye i-oxalate enyibilikayo kwimifuno ivelisa i-calcium oxalate precipitate, echaphazela ukufunxeka kwecalcium).
3. Isesame uncamathisela isinyithi amatyeli aliqela aphezulu kunesibindi, iqanda leqanda, ihlala itya inefuthe elihle kuphela kulungelelwaniso lwe-anorexia, kodwa ikwalungisa kwaye ikhusele i-iron anemia.
4. I-Tahini ityebile nge-lecithin, ethintela iinwele ekubeni zijike zibe mhlophe okanye ziwe phambi kwexesha.
5. I-Sesame iqulethe ioyile eninzi, inomsebenzi olungileyo wokuphumla kwamathumbu.
Isiphumo kunye nokusebenza kweesame:
1. Yandisa ukutya kwakho ukutya. Uncuthu lweSesame lunokukhuthaza umdla wokutya, lubaluleke ngakumbi kukufunxwa kwezakha-mzimba zebhodi.
2. Ukulibaziseka kokuguga. Uncuthu lweSesame luqulathe phantse iipesenti ezingama-70 zevithamini E, enefuthe elibalaseleyo lokulwa ne-antioxidant, inokukhusela isibindi, ikhusele intliziyo kunye nokulibazisa ukuguga.
3. Thintela ukulahleka kweenwele. Imbewu yesesame emnyama ityebile nge-biotin, eyona ilungele ukulahleka kweenwele okubangelwa bubuthathaka kunye nokuguga ngaphambi kwexesha, kunye nokulahleka kweenwele kunye nokulahleka kweenwele okubangelwa zizifo ezithile.
4.Yandisa ukomelela kolusu. Ukutya i-tahini rhoqo kunokonyusa ukomelela kolusu.
5. Cebisa igazi. Ukusetyenziswa rhoqo kwe-tahini unamathisele kungekuphela nje kunesiphumo esihle kulungelelwaniso lokutya ngokungafunekiyo, kodwa ikwanokuthintela ukuswela i-anemia.
6. Ukukhuthaza ukukhula kwamathambo. Umxholo wecalcium kwi-tahini paste uphezulu kakhulu, okwesibini kuphela kulusu lwe-shrimp, uhlala utyiwa uluncedo kuphuhliso lwamathambo namazinyo. Imbewu yeSesame iqulethe ioyile eninzi, enesiphumo esihle sokunyakamisa amathumbu kunye nokukhulula ukuqhina.
Ikhukhi yeLadyfinger, Iibhiskithi zaBantwana, Ukutya amandongomane anetyuwa, Umtya weHawthorn, Intonga yeBhontshisi entsha, Iipakethi zesosi yeSoy,